:: विचार बिशेष
मलाइ अचम्म लाग्छ खाली यति हजार र उति हजार मारेको भन्दै मान्छेहरु किन कसैको अत्यन्तै दुखद घडिमा पनि खुच्चिङ भनि रहेका छन ? के प्रचण्ड बिना कारण कसैको हत्या गर्दै हिनेका थिए ? के त्यो युद्दको कुनै औचित्य र अर्थ नै थिएन त ? याद रहोस त्यो युद्द कुनै बिदेसिले नभइ यहि देशका नागरिकहरुले लडेका थिए । यहि देश भित्रको असमानता, गरिबी र बिभेदले त्यो युद्ध निम्त्याएको थियो । जसको नेतृत्व प्रचण्ड र बाबुरामहरुले गरे । के त्यो १० बर्से युद्द नहुदो हो त २०६२/६३ को सफल जन आन्दोलन सम्भब हुने थियो ? राजतन्त्रको अन्त्य सम्भब थियो ? गण तन्त्र यति छिटै आउथ्यो ? जनताले आफ्नो संविधान आफै लेख्न पाउथे ? के आधारमा प्रचण्डलाइ पापी भन्छौ ? जन्मिदै कसैको रैती बनेर जन्मिने तिमिलाइ रास्ट्र प्रमुख सम्म बन्न सक्ने ब्यबस्था ल्याउनु पाप हो ? कि तिमिलाइ अधिकार सम्पन्न र स्वतन्त्र बनाउनु पाप हो ? फुलको गुच्छा हाना हान गरेर सशस्त्र युद्ध लडिदैन, युद्धको क्रममा जन धनको क्षति हुन्छ नै । के माओबादिले एक तर्फी युद्ध गरेको थियो ? के तत्कालिन राज्य सत्ताले कसैको ज्यान लिएन ? तिमी सुख सुबिधा उपभोग गरेर सामान्य जीवन यापन गरि रहेको थियौ भन्दैमा सारा नेपालीले सुखको सास फेर्न पाएका थिए भन्ने सोच्छौ ? तिम्रा छोरा छोरी
यि हुन दोहोरो नागरिकताधारी लिने व्यक्ती ! दाेहाेराे नागरिकताविरुद्धको उजुरी फिर्ता लिन प्रहरीकै धम्की
२९ कात्तिक, वीरगञ्ज । दोहोरो नागरिकताधारी व्यक्तिलाई बचाउन प्रहरी प्रशासन लागेको आरोप एक परिवारले लगाएको छ । वीरगञ्जमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बारा जितपुर सिमरा उपमहानगरको जितपुर घर भएका शेष अलाउद्दिन र उनकी पत्नी मर्जिना खातुनले त्यस्तो आरोप लगाएका हुन् । बाटोको विषयलाई लिएर छिमेकी मोतिउर रहमानसँग विवाद बढेपछि मर्जिनाले गत १ कात्तिकमा उनी, उनकी पत्नी ४८ वर्षीया आष्मा खातुन र २१ वर्षे छोरा अरमान देवानविरुद्ध जिल्ला प्रशासन पर्सामा उजुरी दिएकी थिइन् । घर झगडाबाट शुरु भएको विवाद दोहोरो नागरिकतामा पुगेपछि एक प्रहरी हवल्दारले लागूऔषध मुद्दामा फसाइदिने बताउँदै धम्क्याउन थालेका छन् । मार्जिना र मोतिउर रहमानबीच सामान्य विषयलाई लिएर झगडा भएको थियो । झगडा अझ बढेपछि अलाउद्दिनकी पत्नी मार्जिनाले रहमान परिवारको दोहोरो नागरिकता रहेको प्रमाणसहित पर्सा प्रशासनमा उजुरी दर्ता गराएकी हुन् । मर्जिनाको उजुरी र प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रशासनको निर्देशनमा जिल्ला प्रहरी पर्साले ५ कात्तिकमा रहमानलाई सिमराबाट नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । नागरिकता बनाउँदा मुचुल्कामा सनाखत गर्ने स्थानीय मथुरा हजरालाई पनि प्रहरीले २१ कात्तिकमा पक्राउ गरेको छ । मर्जिनाको उजुरीमा किटानी नाम रहेका रहमानकी पत्नी र छोराको पनि खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । पर्साका डीएसपी प्रकाश सापकोटाका अनुसार दोहोरो नागरिकताबारे अनुसन्धान पूरा भइसकेको छ । ‘अनुसन्धान सकिएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा मिसिल पठाइसकेका छौं,’ डीएसपी सापकोटाले भने, ‘अब अदालतले
प्रहरी र याैनकर्मीकाे यस्ताे सेटिङ, सिधा कुरा कार्यक्रमबाट भयाे खुलासा । याे समाचार सेयर गरिदिनु हाेला ।
भनेर केहि नगर्नेहरुको भिडमा गरेरै देखाउने ब्यक्तिको नाम हो रबि लामिछाने । भ्रष्टाचार ,तस्करी , अपराधीहरुले घेरिएको नेपालको शासन प्रणालीमा यदि दृढ इच्छाशक्ति र राष्ट्रप्रतिको कर्तब्य बोध हुन्छ भने यसलाई सुधार्न सकिन्छ तर त्यसको लागि भाषण मात्रै गरेर होइन काम नै गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेर देशप्रति सबै नेपालीमा आशाको किरण छर्न रविको सिधाकुरा सर्वाधिक सफल भएको छ । चुनाब भन्दा अघिसम्म देश बिगार्ने नेताहरुलाई गालीगलौज गरेर आफ्नो मनको भडास निकाल्ने अनि चुनाबमा उही नेताहरुलाई जिताउने हाम्रो प्रवृतिलाई सामाजिक संजाल फेसबुकमा पुरुषोत्तम भण्डारीले गरेको यो व्यंग्यात्मक बाणले हरेक नेपालीलाई ठहरै मार्छ ”बिडम्बना अमेरिका पुगेको रबि त्यहाँको बिलासी जीवन छोडेर आफ्नो देश नेपाल फर्किएर एउटा टि भि कार्यक्रम चलाएर देशवासीलाई चेतना फैल्याउदैछ , प्राकृतिक श्रोतको दोहन कसरी भैरहेको छ भनेर भिडियो खिचेर देखाएर भ्रष्टाचारका बिरुद्ध आवाज उठाउन प्रेरित गरिरहेको छ तर अर्कोतर्फ उ जस्तै जोश- जागर भएका हामी युवा चाहि तिनै सडेका – गलेका – कुहिएका नाईके लाई नेता मानेर जि- हुजुरी गर्दैछौं , किन ? त्यही दुई- छाक खान ? छि : खै ! हाम्रो विवेक ? अब फेरि पनि तिनै ब्वासा लाई भोट हाल्ने ?” यसरी रविको समर्थनमा उर्लदो समर्थकहरुको भिडले देश र समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्ने एक नेतृत्वको रुपमा रविलाई स्थापित गर्दै लागेको छ । रबि लामिछाने
अर्घाखाँची वासीको मुहारमा मुस्कान छर्ने “मुस्कान
विरेन्द्र खनाल/ राजनीति भित्रको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरणले मुलुक आक्रान्त भइरहेको बेला हामी मतदाताहरुले नै जिताएर फुलमाला लगाइदिएका जनप्रतिनिधिहरु हामिप्रती कति उत्तरदायी बने? हामी कसलाई जिताउनु पर्थ्यो,कसलाई जितायौ र कसलाई जिताउनुपर्छ?यो विषयको हेक्का राखेनौ भने राजनीति शब्दलाइ मात्र दोष नलगाउ हामीभित्र पनि केही कमजोरी छ। हामी हाम्रो अधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा कतै फेरि ती पुरानै गल्तिहरु दोहोर्याइरहेका त छैनौ गम्भीरतापुर्वक आत्मविश्लेशण हुन जरुरी छ। निर्वाचनको मिति नजिकिदै छ।नेताहरु घरदैलो कार्यक्रममा ब्यस्त छ्न।यसै सन्दर्भमा ५ नम्बर प्रदेश अन्तरगतको पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा चुनावी रौनकता बढदो छ।प्रतिनिधिसभामा एउटा क्षेत्र र प्रदेशसभाको लागि दुइवटा क्षेत्र रहेको अर्घाखाँचीमा साबिकको क्षेत्र नम्बर १ अर्थात हाल प्रदेश सभा “क”मा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट जिल्ला पार्टी सभापति समेत रहेका बिष्णु प्रसाद खनाल”मुस्कान” चुनावी मैदानमा छन। २०३६ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएका मुस्कान पन्चायत बिरुद्धका आन्दोलनमा सक्रिय रुपमा सहभागी बने।अर्घाखाँचीमा भएका हरेक परिवर्तनको लडाइमा नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध रहेर विभिन्न तह र तप्काको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका उनै मुस्कान आज चुनावी परिक्षामा छ्न। जनताको तहमा पुगेका उनी ५ नम्बर प्रदेश अखण्ड रहनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रमा पार्टिको निर्णय र निर्देशन भन्दा माथी उठेर आन्दोलनमा अर्घाखाँचीको नेतृत्व गरेका थिए। सदैब जनताको मनोभावलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मुस्कान २०४३ सालदेखी हालसम्म सदरमुकाम सन्धिखर्कमा भाडाको कोठामा बस्छन।उनी सङ्ग न घर न घडेरी छ र त्यो जोडन पनि सकेनन।जनताकै सेवामा
१. मानिस शोभाकर पराजुली/ सम्पतिका संवन्धमा कतिपय विवादास्पद अनुभवहरू छन् । सुखका बारेमा पनि छन् । सुख भनेको बाहिरी सम्पतिबाट आउने हो कि मनबाट आउने हो ? मनबाट आउने हो भने सुख सम्पतिमा छैन भन्न सकिन्छ । बाहिरी सम्पतिको प्राप्तिबाट सुख आउने हो भने पनि यसको कुनै ठेगान रहेनछ । कहिलेकाँही सुरक्षाको प्राप्ति र सम्पतिको अनावश्यक क्षतिबाट बचाउनु पनि सुख हँुदोरहेछ । नेपालमा माओवादीहरूबाट पीडित भएर, उनीहरूलाई खान दिने, बस्न दिने, छोरीबुहारीहरूलाई यौन शोषणबाट बचाउने, कुटिन वा मारिनसम्मबाट बचाउने र जबर्जस्ती पैसा असुल्ने कार्यबाट बच्ने उद्देश्यका लागि पनि काँग्रेस समेतबाट माओवादीमा प्रवेश गरेको जानकारी पाइयो । हामी आनन्द चाहन्छौं अर्थात् सबै प्रकारका पीडा र अप्ठेराहरूबाट मुक्ति चाहन्छांै । तर ती सुखहरू कहाँ छन् त ? “खोज्दछन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ ? आँफू मिटाई अरुलाई दिनु जहाँ छ । ”यो वाक्य त हामीले धेरै पहिलादेखि सुन्दै आएका हौ“ । मानिसहरू सुखको लागि अध्यात्मको खोजी गर्दछन् वा बाटो लिन्छन् । आध्यात्मिक माध्यमद्धारा सुख पाउने चेष्टा पनि गर्दछन् । कहिलेकाँहि अचम्म पनि लाग्दछ, खरानी घसेर अरुले दिएको दानमा बाँच्दा खुसी हुने मानिस पनि यो दुनियाँमा छन् । माग्नेहरू पनि छन् । खान नपाएपछि र काम गरेर भन्दा माग्न सजिलो भएपछि मानिसले त्यसो गर्नु स्वभाविक हो पनि भन्न सकिएला । यथार्थ त्यही“
स्वार्गीय दिदिलाई हत्यारा भाइको मार्मिक पत्र (पढे पछि सेयर गरिदिनुहाेला)
ं पढे पछि सेयर गर्न नबिर्सनुहाेला । आदरणीय दिदि प्रणाम, तिम्रो आत्माले त्यहा शान्ति पाइरहेको छ भनी कामना गरेको छु।हुन त तिमिलाई यो पत्र लेख्नुको कुनै औचित्य छैन किनभने तिमी मेरो पत्र पढ्न सक्दैनौ र मलाई कहिल्यै जवाफ मिल्ने छैन।तर मनले आज पत्र नलेखी बस्न मानेन।जब भित्तामा रहेको क्यालेन्डरले तिहार आएको संकेत दिन थाल्यो तब झन तिम्रो याद खहरे बनेर ओर्लियो अनि जेलभित्रको चिसो भुइबाट यो पत्र लेख्न बिबश भए दिदी। दिदि, यो जेलभन्दा बाहिर पक्कै पनि तिहारले पाइला टेकिसक्यो होला।हिजो मात्र हवल्दार सापलाई आफ्नो दिदिले जसरी पनि भाइटीका थप्न आउनु भनेर फोनमा फोनमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो।अनि म पनि तिमिलाई सम्झेर धेरै रोए।सानोमा म रुदा तिमिले केटा मान्छे भएर रोएको सुहाउदैन भन्ने सिद्दातन्तले आज तिमिलाई नै सम्झेर रुदा केही काम गरेन दिदी। सानोमा बुबा बितेपछी आमा त सधै शोकमा बस्नुहुन्थ्यो।त्योबेला तिहार आउदा तिमि धेरै खुशी हुन्थ्यौ अनि म पनि।अरुको घरमा जस्तो सधै मिठोमिठो कुरा हाम्रो घरमा कहिल्यै पाक्दैनथ्यो।तर तिहारमा भएपनी आफ्नो भाइलाई मिठो खुवाउछु भनेर तिमि पैसाको जोहो गर्न दशै सकिने बित्तिकै जिम्माल बाजेको खेतमा धान काट्न जान्थ्यौ।भाइटीकाको दिनमा तिमि आफैले मलाई नुहाइदिन्थ्यौ अनि सफा कपडा लगाइदिन्थ्यौ।तिमि मेरो जिन्दगी रंगीन होस भन्दै मेरो निधारमा सप्तरंगी टीका लगाइदिन्थ्यौ।आफैले बनाएको चेप्टो चेप्टो सेल ठुलो टपरीमा हालेर दिन्थ्यौ।तिम्रो त्यो ठुलो टपरीमा खानेकुराहरु भरिदैनथ्यो त्यसैले
माओवादीको अहिलेको हैसियत त २० प्रतिशत पनि छैन !
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन अप्रत्यासित हो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको जुन गठबन्धन थियो र दुवै सरकारमा थिए । जसका कारण कांग्रेसको लागि यो ठूलै अचम्म भयो होला । तर देशको ऐतिहासिक क्रमबाट हेर्दा, वाम आन्दोलनलाई हेर्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको ईतिहास पल्टाउँदा यस्ता एलाइन्स भईरहेकै छन् । अहिले दुई वटा निर्वाचनका अगाडि भएकोले नेपाली कांग्रेसलाई झड्का लागेको छ । माओवादी र एमालेको गठबन्धन सुन्ने वित्तिकै कांग्रेसमा त ८ रेक्टरको भूकम्प नै गयो । कांग्रेस अहिले त्यो झड्काबाट तङग्रिदै छ । उसले पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धन गर्दै छ । नेपालको वाम आन्दोलनको पृष्ठभूमि कम्युनिस्ट आन्दोलनको पृष्ठभूमि हेर्दा मलाई चाहिँ त्यति अनौठो, अस्वभाविक, अचम्म, आश्चर्य लागेको छैन । नेपालमा वाम एकताको कुरा झण्डै सात सालदेखि नै चलिरहेको हो, तर यसले मूर्तरुप लिएको कहिल्यै पनि छैन । विभिन्न चरणमा विभिन्न किसिमले कुराहरु उठेका छन् । चाहे मनमोहन हुँदा होस चाहे पुष्पलाल हुँदा होस् चाहे झापाली आन्दोलन हुँदा नै किन होस् । बेला बेलामा बाम एकताको कुरा उठ्ने गरेको छ । तर हुन सकेको छैन । अहिले पनि १८–२० वटा वाम शक्तिहरु विभाजित छन् नेपालमा । त्यो पृष्ठभूमिलाई हेर्दा नेपालको कम्युनिस्ट चरित्रको विपरित व्यवहार देखिन्छ यो गठबन्धनमा । कम्युनिस्टहरु फुट्नु स्वभाविक देखिन्छन् । जुट्ने चरित्र चाहिँ अलि अस्वभाविक देखिन्छ । माओवादी छ
अाेलीलाइ खुल्लापत्र: मनाङ्गेलाई पार्टिमा भित्र्याउनु थियाे भने दिनेश अधिकारी हत्या किन गराईयाे ? – सबिन कार्की
नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपि शर्मा अाेलीलाइ सामाजिक सञ्जाल प्रयाेगकर्ता सबिन कार्कीले फेसबुक मार्फत अाज एउटा मार्मिक तथा व्यंग्यात्मक तरिकाले खुल्लापत्र लेखेका छन् । उनले नेकपा एमाले कार्यकर्ताकाे अपार सङ्घर्ष र अाहुतिले सिंचित फुलबारी हाे, खबरदार काँडा उमारेर बगैँचा मास्ने कार्य बन्द गरियाेस भन्दै सात वटा प्रश्न समेत तेर्साएका छन् । अादरणीय अध्यक्ष कमरेड केपि शर्मा अाेली धुलै धुलाेकाे शहरबाट रक्तिम सलाम अध्यक्ष महाेदय याे खुल्लापत्र लेख्नु मेराे रहर हैन केहिदिन देखि का पार्टिका क्रियाकलापहरु हेर्दाहेर्दै सुन्निएका अाँखा र स्थानिय चुनाबमा ज्यान हत्केलामा राखेर एमाले जिताउन अहाेरात्र खटेकाे मन अाज साह्रै दुखेकाे महसुस भयर बाध्यताले लेख्दैछुु अादरणिय कमरेड सर्वप्रथम म तपाईलाई साेध्न चाहन्छु यी प्रश्नहरु 1) राष्टबादकाे अाडमा पार्टिभित्रै जनबादकाे घाँटी निमाेठ्ने अधिकार तपाईं एक्लै कि केन्द्रीय समितिकाे समर्थनमा हुदैछ? 2) कमिन्युष्ट्ट पार्टिकाे सदस्य बन्न चाहिने अाबश्यक गुणहरु केके हुन? 3)जुन व्यक्ति ले कहिल्यै कमिन्युष्ट दर्शनबारे चासाे राखेन उ हाम्राे सैदान्तिक र बैचारिक प्रशिक्ष्ण बिनै सदस्य बन्ने बेथितिकाे नियमले के पार्टिले सैदान्तिक फड्काे मार्दै क्रान्तिकाे अबिभारा पूरा गर्न सक्ला? 4) चाेर डाँका लुटाहा र डनहरुकाे प्रवेशले पार्टिमा उनिहरुकै बाहुल्यता हुँदै जाँदा हामिजस्ता ईमान्दार कार्यकर्ताहरु टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिएला? यदि पार्टिका ईमान्दार कार्यकर्ताले विद्राेह गर्नैपर्ने दिन अायाे भने सिङ्गै माअाेबादि मिसाउदा पनि एमालेले त्यसकाे भर्पाई गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हेक्का किन राख्नुभयन? 5) पार्टि
भविष्यको नेपाल कस्तो होला ? कसरी बदलिन्छ होला ?
उज्वल थापा, प्रायले मलाई सोध्छन् – भन न उज्वल, भविष्यको नेपाल कस्तो होला हँ ? कसरी बदलिन्छ होला? प्राय ठोडो उत्तर दिन्छु, “कहाँ बाट थाहा हुनु नि मलाई?” नत्र केवल हल्का मुस्कान दिदैँ भन्छु “ठिकै हुन्छ नि – राम्रै”। तर मन भित्र चाहिँ सोची रहन्छु नेपाल भविष्यमा कता जान्छ होला भनेर। आज त्यहि मनभित्रका सोचलाई ३० वटा भविष्यवाणीको रुपमा प्रस्तुत गरेको छु। ल पढौँ नेपालको स्वरुप सन २०३० मा। २०३० मा… अहिलेका यी सबै भातमारा असक्षम नेताहरु जसलाई तपाँई तिव्र घृणा गर्नुहुन्छ वा थुक्नु हुन्छ – तिनीहरू बिलाउनेछन्। बरु हांमी मध्यबाटै सच्चा, लगनशील र अहिले सम्म कुनै राजनितिक पार्टीसँग आबद्द नभएकै नेतृत्वहरु हाबि हुने छन् त्यस बेला। त्यति बेलाको नेपालको सर्वश्रेष्ट १० व्यवसायहरु अहिले शुरु नै नभाकोहरु नै हुनेछन् । काठमाडौँ छिर्नेहरु भन्दा छोड्नेहरु धेरै हुनेछन्। नेपालमा आउने धेरै जसो पर्यटक धार्मिक कारणले नै आउँछन्। नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात पानी हुनेछ। अन्तराष्ट्रिय शेएर बजारमा नेपालको पानी कुनै न कुनै रुपमा व्यापार हुनेछ।( अहिले तेलको भए जस्तै)। नेपाल पुलिसले पुरै बर्ष भरि ८५० भन्दा कम गोली चलाउने छ। ४ मा १ नेपालीको दोहोरो नागरिकता हुनेछ। नेपाल आई-सि-सि विश्‍व कप क्रिकेट को आयोजक बन्नेछ। यस बेला नेपालले नै जित्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। पहाडी भेगका जग्गाको भाऊ तराई र उपत्यका भन्दा बढि
दशैं तिहार अगाडी सेयर बजारमा कुनै जादु होला भन्ने नसोचे पनि हुन्छ : (रोहन शर्माको ब्लग)
“श्रावण/भाद्र बाली भित्राउने समय भन्थे, न असिना पानी, न त कुनै प्रकोप, सिजनमा पनि बाली फस्टाउनै सकेन त !” “सिजनमा पनि बढ्न नसकेको देख्दा अब त बढ्ला भन्ने आसै छैन!” “सेयर बजारमा चैत/बैशाख बाली लगाउने श्रावण/भाद्र भित्राउने भन्थे, न असिना पानी, न त कुनै प्रकोप सिजनमा पनि बाली फस्टाउनै सकेन त! “नाफा भएन प्रफिट बुक गर्नु, स्टप लस गर्नु भन्ने भुतले त झन् नराम्रोसँग डुबाउने भो !” पछिल्लो समय बजारमा यस्तै यस्तै कुराहरु सुनिन्छ्न्। मनन गर्नैपर्ने केहि तथ्यहरु; सबैले चैत्र बैशाखमा किन्ने अनि श्रावण भाद्रमै बेच्ने भए श्रावण भाद्रमा किन्ने चैं कसले। सेयर बजारमा प्रबृतीहरु सँधै एकैनास हुँदैन, प्रबृती फेरीई रहन्छ, नयाँ नयाँ प्रबृती देखा परीरहन्छ। तसर्थ बजार प्रवेश गर्नेले पहिलेनै सबै प्रकारको अवस्थाको सामना गर्ने मनस्थिती बनाउनु जरुरी छ। बजार बढ्दा खरिदको लागी आज नै अन्तिम दिन हो भन्ने सम्झनेनै घट्दा पनि बिक्रीको लागी आजै अन्तिम दिन हो भन्ने सम्झन्छन्। अनि उल्टो चाल चल्छन्, फलत नकारात्मक मनोबिज्ञान हावी हुँदा कुनै ठोस कारण बिनानै बजारमा तिब्र उतार चढाव हुने गर्दछ । ज बजार घट्दा डराएर घाटामा बिक्री गर्नेले नै हो भोली बजार अस्वभाबिक रुपमा बढ्दा हौसिएर खरिद गर्ने। घट्दा डराएर बेच्नेले कहिले पनि सस्तोमा सेयर खरिद गर्न सक्दैन। सेयर बजारबाट नाफा कमाउनु भनेको उसको लागी आकाश को फलझैं हुन्छ । बजार